Isifo senkukhu | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Isifo senkukhu
Esimweni sethu, ukufuywa kwemfuyo noma izinkukhu kungenye yamagatsha amaningi kwezolimo. Kodwa ukuze ukhule inyoni enempilo udinga ukuqapha izimo zabo zokuboshwa. Inzuzo yakho ngokuqondile ixhomeke kulo. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izifo eziningi zixhomeke ekudleni okufanele kanye ne-microclimate.
Yini okufanele uyenze uma ama-broilers eshaya, isifo, isifo sohudo: indlela yokuphatha izifo zezinkukhu
Ama-broilers athandwa ngabalimi nabanikazi bezindawo zokulima ezincane. Быстрые темпы роста и простота в содержании привлекают многих. Будущим владельцам будет полезно узнать, какие болезни могут проявиться у цыплят, каковы их симптомы и лечение.Ukuphikiswa kwama-broilers ezifweni I-Broilers yeminyaka yonke yansuku zonke isengozini kakhulu, ngakho-ke idinga ukunakwa okukhethekile.
Izifo zama-broiler izinkukhu: kanjani nokuthi yini okufanele ukhethe izifo ezingenakuxhumana nazo
Inani elikhulu labanikazi beefama kanye namapulazi angasese, ukuthenga inkukhu ye-broiler, bacabange ukuthi kuyoba eshibhile futhi kunokwethenjelwa ngokwengeziwe ukukhula izinkukhu ezinjalo ngokusebenzisa izikhukhula zokuphepha eziphephile. Futhi abaningi sebevele sebehambe ngale ndlela. Kodwa-ke, kwavela ukuthi ingxenye ethile yokunciphisa okungenakuqhathaniswa okungeziwe kakhulu yengezwe kulezi zinzuzo, indawo eyodwa ebalulekile phakathi kwezifo zezinkukhu ze-broiler, izimpawu zazo ezibonakala kalula, kanye nezindlela zokwelashwa ezihlolwe iminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho.
Isixazululo somlomo "Baytril" 10% - imiyalelo yokusetshenziswa
Namuhla sizokhuluma ngesidakamizwa esinjalo njenge "Baytril", esetshenziselwa kabanzi kwezokwelapha. Isetshenziselwa ukwelapha i-mycoplasmosis kanye nokutheleleka kwamagciwane ezinyoni ezifuywayo. Kulesi sihloko uzofunda ngezici eziyinhloko zaleli thuluzi. Incazelo, ukwakhiwa nokukhishwa kwefomu lomuthi Isidakamizwa sine-25 g we-enrofloxacin.
Indlela yokuphatha isifo sohudo ku-broiler izinkukhu
Ama-broilers asekhulile asekhulile ezinkukhuleni nezinkukhu. Kukhona izizathu zokuthi - izinkukhu ezinjalo zizithobekile ekunakekeleni futhi zikhule ngokushesha. Kodwa futhi ngezikhathi ezithile baletha izinkinga kubaphathi bazo. Enye yezinkinga ezivame kakhulu ukuhuda kwezinyoni, ngakho-ke le nkinga idinga ukucubungula okuhlukile.
Indlela yokuphatha isifo sohudo ezinkukhu
Abalimi bezinkukhu ezizimele ezihlanganyela ekutshaleni ama-broilers, bangabhekene nengozi njengesifo sohudo. Iyini imbangela yalesi sifo nendlela yokubhekana nayo, sicabanga ngalesi sihloko. Izimbangela zokuhuda Izimbangela zezinkukhu zingaba: izifo ezibangelwa izimo ezimbi; okuphakelayo kwekhwalithi ephansi; bathola abagulayo.
Okufanele ukwenze uma izinkukhu zingakhuli
Ama-stockings akhula angabangela inkathazo enkulu kubalimi bezinkukhu: ngesikhathi sokuqala sokuphila kwabo, izinkukhu zizwela kakhulu ezimweni zangaphandle - noma yikuphi ushintsho kungathinta ukuthuthukiswa kwazo. Ukuze ugweme lokhu, kubalulekile ukulawula ngokucophelela izimo zezulu ezinkukhu, ukuqapha ukudla kwazo, ukwenza izinyathelo zokuvimbela izifo, kanye nokwazi izizathu eziyinhloko zokukhula kwentsha.
Indlela yokuphulukisa, ukugaya, ukukhwehlela ezinkukhu nezinkukhu
Inqubo yokukhulisa izinyoni, ngezinye izikhathi umuntu angase ahlangabezane nezimpawu eziphazamisayo njengokukhwehlela nokunyakaza. Okunye ukuphazamiseka kokuphefumula kungase kwenzeke, njengokuphefumula okunzima, ukuvunguza okuhlukahlukene. Ukungazinaki lezi zimpawu kungabangela ukufa kwezinyoni nokulahlekelwa yingxenye ebalulekile yabantu.
Okufanele ukwenze uma inkukhu inemilenze
Izinkukhu, ngokuvamile, azizona zezinyoni, okuqukethwe okuhlotshaniswa nezinkinga ezithile. Kodwa abantu abadala kuphela abaqinile futhi abanenhlonipho. Izinkukhu, ngokuphambene nalokho, ziyizilwane ezinomthelela futhi ezinobungozi, zingahle zibhujiswe ngisho nokushicilela okulula noma ukwehla okungadingekile ekushiseni. Kodwa ngezinye izikhathi esikhwameni esibheke kahle, kukhona ukuphazanyiswa okunjalo okungaqondakali, njengokusakaza amaphawu: inyoni ayikwazi ukuma impela futhi ibonakala ihlezi ngentambo.
Izinkukhu zihlale zidinga ukunakwa okukhudlwana kubalimi, ngoba ukuzivikela kwezingane akukakwazi ukumelana nemiphumela eyingozi yemvelo, ngakho-ke izinkukhu ziyithatha kalula izifo ezihlukahlukene. Uma ungaphenduli ngokushesha izinkinga ezihlangane nazo, khona-ke kukhona ingozi yokulahlekelwa yonke imfuyo.
Kuthiwani uma izinkukhu zifa
Lapho kuzaliswa izinhlobo zezinkukhu ezikhiqiza kakhulu, abalimi abaningi babhekana nezinkinga ezinkulu, kuhlanganise zonke izinhlobo ze-pathologies nokuphazamiseka ekusebenzeni kwezilwane zasolwandle. Enye yezinto ezivame kakhulu phakathi kwazo ukuwa kwezinkukhu ezinkukhu ezincane. Lo mkhuba unemiphumela emibi kakhulu kwabancane, njengoba ukukhubazeka okusheshayo komzimba kungaholela ekufeni kwezingane zonke.
Indlela nokuthi yini okufanele ukhathalele izinkukhu ze-pullorosis
Izinkukhu ezincane zijwayele izifo eziningi ezivame ukubulala ngesonto lokuqala lokuphila kwazo. Yiqiniso, kunzima kumlimi wezinkukhu wezinkukhu ukukhumbula zonke izinhlobo zezifo ezikhona, kodwa okujwayelekile kakhulu kufanele ukwazi. Kulesi sihloko, sizobe sibheka inkinga enjalo eyaziwa njenge-pullorosis, futhi sikutshele izimpawu zayo, ukuxilongwa nokuphathwa.